आज कति विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् … – " सुलभ खबर "
आज कति विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज साताको छैटौँ दिन (शुक्रबार) अमेरिकी डलर र कुवेती दिनारसहित प्राय सबै देशको भाउ सामान्य रुपमा ओरालो लागेको छ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ २४ पैसा तथा बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७२ रुपैयाँ ९२ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय एक रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ । बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय रुपैयाँ ३६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय १ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ ।तालिकामा हेर्नुहोस् सबै देशको विनिमयदर